1st. Day nke Oge Ikpeazụ
Otutu ime nwere oge izu 40 (ma ọ bụ izu 38 site na ịmụ nwa) Ya mere ịgụta ọnụ izu 40, ma ọ bụ ụbọchị 280, site na ụbọchị ikpe azụ nke LMP (Oge Ọgwụ Menstrual Performance,) bụ ụzọ kachasị dị irè iji tụta oge ị dị ime. prefermụ nwanyị na-ahọrọ iji Calculator Datebọchị Mkpa Ọrịa, mana n’isiokwu a, a ga m akuziri gị otu esi ejikwa ya na-enweghị ya!
A Ebe a na-eme mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ngwa bu ngwa abuo iji ejiko na ndi olulu. Ọtụtụ mgbe ndị a na-alụbeghị di n'ịntanetị na-ejikarị ime. Intentionfọdụ kpachapụrụ anya, ụfọdụ na-emehie. Agbanyeghị, saịtị anyị na-enye ikpo okwu nwere ike ịchọta ezigbo Sugar Daddy, Sugar Mama ma ọ bụ Sugar Baby. Onye anyi ga acho ka anyi bido eziniulo ma mechaa turu ime ma muo nwa. Yabụ kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-achọ nwa amụrụ ọhụrụ?
Ngụgụ ụbọchị tụụrụ ime ma ọ bụ obi
Ndị ọzọ Na-A Ngụkọta oge ịtụrụ ime ime iwepu ọnwa atọ site na mb firste ikpe-azu nke ubọchi ikpe-azu-ha, were ubọchi isi g addtiye ya isi. Ndị dọkịta na-atụ aro ka esi ekwupụta ya, n'ihi na ọ bụ ụzọ kachasị mma iji tụọ ụbọchị ịchọrọ - ọ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Agbanyeghị, esorola onwe gị nso ma ọ bụrụ na ị tụrụ ime otu izu ma ọ bụ abụọ tupu ma ọ bụ mgbe emesịrị, n'ihi na ọ ka bụ ihe dị mma.
Lzọ nke LMP kacha dị irè nye ụmụ nwanyị, bụ ndị nwere usoro nsọ mgbe niile. N'ihi na ụbọchị ebumnuche a tụkwasịrị obi maka nnyefe (EDD) dị mkpa. Naanị tinye ụbọchị 266 ka ị nweta ụbọchị ịtụrụ ime gị dị.
Transferbọchị Nyefe IVF
Dabere na nnyocha nke erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) mere, a na-eme ihe karịrị usoro ọmụmụ teknụzụ gbasara ọmụmụ 250,000 kwa afọ na United States. N'ihi ya, a na-amụ ụmụaka dị puku asaa na iri asaa na asaa kwa afọ.
Otu onye nwere ike gbakọọ ụbọchị nke ọfụma karịa iji ụbọchị mbufe nke IVF, mana ọ bụrụ naanị na ị so na ngụkọta oge nke amụmụ nke IVF.
Calculator & Ihe nlele nke diri ime ime
Ihe ndị a ga-enyere gị aka ịchọpụta ụbọchị ị ga-anọ na mgbe ị ga-amalite ịmụ nwa ga-amalite, gụnyere:
Ihe nleba anya nke mbu, nke na –eme kariri afọ ime ya. Buru n'uche, na ọ bụghị ụmụ nwanyị ọ bụla na-enweta ọgwụ ọkụ n'oge. Ọtụtụ ndị na-eme nyocha na-enyocha ultrasound otu oge, agbanyeghị ole na ole na-akwado otu ma ọ bụrụ na oge gị ezughi oke, ị dị afọ 35 ma ọ bụ karịa, ị nwere akụkọ banyere ime ọpụpụ ma ọ bụ nsogbu ịtụrụ ime, ma ọ bụ ụbọchị ikpebisi ike ikpebisi ike. dabere na gị nyocha anụ ahụ na LMP.
N ’izu nke 9 ma ọ bụ n’afọ 10, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị iche, ihe ịtụrụ ime na-eme dịka oge izizi obi nwa ahụ na mgbe ị na-enwe mmegharị nke nwa ebu n’afọ. Nkezi n’agbata izu iri na asatọ na iri abụọ na asatọ, mana ọ ga - adị tupu ma ọ bụ. Nke a nwere ike ịgwa gị ma ụbụ oge ịtụrụ ime gị dị nkpa.
Ọ bụ dọkịta gị ga-atụle nha gị site n’ọkpụkpụ ọkpụkpụ gị ruo n’ọkpụkpụ akpanwa, ọ na-enyocha usoro ịtụle nke ime ime gị. A makwaara dị ka ịdị elu fundal.
Ihe puru iche n'ihe banyere EDD bu ogo uterus gị (nke a ga-ekwupụta mgbe a na-eme nyocha ime ime mbụ gị).
Na-eme atụmatụ Duebọchị Mkpa Ọ Dị!
Mmadu ga agba mbo oge mgbe n’enye mmadu ime ka anyi “cheputa” Duebọchị Iburu n’afọ. Nke a metụtara ma mmadụ na-anwa izere ịtụrụ ime na oge ọkọchị ma ọ bụ onye nkuzi chọrọ ịmụrụ nwa ọhụrụ oge.
Agbanyeghi na inwere ike itu ime na ntukwasi obi n’usoro gi, buru n’uche na o nwere ike o gaghi enwe ike itule n ’oge imu nwa (ma obu izu ma obu onwa!).
Anyị ike na-akwado ndị Ihe mgbako Ovulation akpọrọ Calculator ụbọchị iji chọpụta ụbọchị ị ga-atụ anya.
Gbanwee na Oge Imem diri!
Dọkịta gị nwere ike ịgbanwe ụbọchị ịchọrọ ka afọ ime gị na-eto. Oge gị nwere ike ịbụ nke na-enweghị oge na oge ị ga-etinye ultrasound ma ọ bụ na ultrasound mbụ gị nọ na ọkara nke abụọ.
Nwere ike ịnwe oke elekere na-adịghị ahụkebe, ma ọ bụ ọkwa alfa-fetoprotein (AFP) nọ n'akụkụ nke nkịtị. A ga-eburu dọkịta gị ajụjụ ndị ọzọ.
OsoteOlee otu m ga-esi chọta ma sonyere otu WhatsApp Group Chat, Kpọọ ma ọ bụ jikọta ya? »
Previous «Egwuregwu Datingmụaka Di na Nwunye Na-akpata Nsogbu na America
`` yashavantha ekwu, sị:
February 17, 2020 na 1: 36 pm
Daalụ bro weebụsaịtị gị nyeere aka wiyh nwunye m aka
OlegWak ekwu, sị:
February 18, 2020 na 9: 47 pm
Привет народ, сорян если не туда обращаюсь, что то не могу отправить лично сообщение что то не понятно у меня кажетсяе то мгрм тогрмгр
Tags: 100 Percent Free Chat Rooms Maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị100% Weebụ Ntanetị Weebụ Ntaneti na ngwa ọdịnalaNgụkọta oge ịtụrụ ime ime